Gabannada Gobolka GALGUDUUD oo u guntaday geddey GUURTIDU ka gaabsheen! | KEYDMEDIA ONLINE
Bashiir M. Xersi - Gaban, Dhallinyaro iyo Da’yar haddaad tahay, waxaad ku xukuman tahay gu’yaalka aad jirto aadna DAMBIILE ku tahay, eed iyo tuhun kale ma lihid aan ka ahayn in sanadkaagu intaa yahay.
Hubaal in murti ahayd: “Labaatan jir intuu GEED ka boodo ayuu TALO ka boodaa!” mid kalana waxay tiraa: “Labaatan jir GAWSKIISA ayuu ku GARAAD yahay” ama “Labaatan jir waa LAYLI, Laynina biyo kashiisha ku jiruu ka didaa!”.
Meeqaad aragtay dhallinyaro lagu haaraamayo inay yihiin xaabada lagu shido dabka dagaalka sokeeye? Imisaad maqashay da’yar loogu diganayo inay yihiin Malleeshiyo lagu adeegta? Haddana, kuwa aragtidaa soo gudbinaya ma caddaalad samayn. Maxaa yeelay, haddii murtidu sidaan soo sheegay leedahay, asee ay ciladu ku daaban tahay caqli aan buuxsamin awgeed, aayaan si mug leh loo abbaarin cidda, qolada, kooxda iyo tolka dabada ka riixaya dhallinyarada.
Taa ka sokow deegaannada qaar wali SHARWADAYAASHII ayaa maamula, dhaqdhaaq ku aaddanna iima muuqdo sidii looga dulqaadi lahaa dadka deeganka ee ay dullaysteen. Kuwa kale, waa BAR FURAN iyo BAYD aan BAAB lahayn, maamullo jilacsan oo aan ku qotomin DOORASHO, RABITAAN dad iyo YAA MUDAN ayaa ku magacaaban ama loo magacaabay! Maxaa xiga oo dhaafsiisan magacoow? Bal adba.
Qoraalka waxaan ku soo gaabinayaa, inaan maalin walba la taagnaan shir looga hadlayo GOBOLLADA DHEXE ayaa ka dhacay Muqdisho, horta kaalay miyaan magaalo kale, oo ku taal deegaanka dhexdiisa shirka lagu qaban karin, maxaa maalin walba loogu sii qulqulaa Muqdisho? Mise waaba meesha laga maleego munaafqadda lagu kala daadsho ama lagu kala dilo dadka wada deggan deegaankaa? Allaw aday ku leedahay.
Midda kale, aawaye Xildhibaannada metala deegaanka? Wali ma aragteen dhaqdhaqaaq siyaasadeed ee ay ka sameeyeen Gobolka? Marka laga reebo safar QARAABO salaan iyo QURBAAN doonasho ah, maxaa yeelay, qodobbo iyo qoraal maamul loogu samayn karo deegaannadaa kama arag, taa oo ka dhigan inay yihiin FAASHILIIN iyo FADHIID aan FANDHAAL XEERO ku XAGAN karin.